Erayo macaan oo shukaansi ka baro erayojaceyl.com
Halkani waxaad ku baran doontaa erayo macaan oo shukaansi ah, sida loo qoro shukaansi qoraal ah weliba shukaansi wiil iyo gabar dhex marayo.
Erayo Jaceyl ah oo soo jiidasho leh, geeraar jaceyl oo amaan ah, geeraar calaacal, fariimo jaceyl dad kala fog, warqad jaceyl oo macaan.
Halkani kuma baran doontid oo kaliya erayo macaan oo shukaansi ah ee waxaad ku baran doontaa wax walbaa oo ku saabsan jaceyl dhab ah. Shukaansi bilow ah oo aanan erayo macaan wadanin waa sida shaax aan sokor lahayn. Shukaansi jaceyl oo aanan erayo macaan la soconin waa sida baasto aanan suugo lahayn.
Dhadhan ma leeyahay shaax aan sokor lahayn?
Jawaabta macquulka waa: MAYA.
Hadaba baro maanta erayo macaan oo shukaansi ah, kuma bari doono sida loo qoro shukaaansi qoraal ah oo keliya ee xitaa waxaan ku bari doonaa habka ugu fudud ee loo shukaansado gabdhaha ama wiilasha. Waxaan soo raacin doonaa muuqaal ku saabsan sida loo shukaansado, ama habka loo jilo shukaansiga sida Hindi Af Somali ah oo kale.
Haddii aan nahay bahda erayojaceyl.com waxaan kaa haqabtiri doonaa wax walbaa oo ku saabsan jaceyl, nolol farxadi ku dhisan.
Jaceyl lagalo waa dareen aad u macaan badan laakin waa markii jaceyl ku haleelo oo aad dhadhamiso dhadhanka dhabta ah ee uu leeyahay jaceylka.
Waxaan maqli jiray waxaan ahay naf jaceyl hayo, waxaan rabaa in aan jaceylkeyga u bandhigto qofkaan dunida ugu jecelahay, runtii iyada la,aanteed noloshu macno iima lahan.
Markuu qof jaceyl haleelo muxuu yiraahdaaa?
Mid unbaa qalbiga
Meel unbaa i go,deee
Alla Murugo jaceyl maxaa i baday
Qish: Todobaadkii la soo dhaafay waxaan ka soo hadalnay qormooyin cajiib ah kuwaasoo akhristayaasheenu ay u riyaaqeen, haddii aadan horay u akhirsan oo aadan akhrisayaashaasi kamid ahayn halka hoose ka akhriso oo riix.